RedNotebook: ny bilaoginao sy ny diarinao amin'ny Linux (Fizarana I) | Avy amin'ny Linux
Efa ela aho no te-hitady rindranasa ahafahako mandray an-tsoratra ary miaraka amin'izay dia afaka manome ahy azy ireo ho amin'ny ho avy tsy voafaritra. Misy ny rindranasa toa an'i Tomboy izay toa afaka nahafa-po izany filana izany, saingy rehefa nampihatra azy aho dia hitako fa tsy miasa mihitsy io rafitra io.
Ny fampiharana toa an'i Tomboy dia tontolo mitovy amin'ny fampiasana an-tsoratra miraikitra amin'ny firaketana ireo angona mifandraika amin'ny fotoana. Ny nilaiko dia bokikely, zavatra hanoratra betsaka araka izay tadiaviko ary manapa-kevitra any aoriana raha misy ifandraisany izany na tsia. Izany no nahatonga ny fikarohana nataoko hitarika ahy amin'ny fampiharana atolotray anao anio: RedNotebook.
RedNotebook dia, bilaogy sy gazety maro karazana, araka ny filazan'ny mpanoratra azy. Izy io dia misy kalandrie hivezivezy ao amin'ny naoty isan'andro, modely azo ovaina ho an'ny naotinao, mpanamarina ny tsipelina, fiasa hanondranana izay voasoratra sy fiasan'ny tagging. Izy io dia manana "Word Cloud" izay anehoana ireo tena ilaina indrindra (Toy ny amin'ny famolavolana bilaogy taloha), na dia azonao atao aza ny mitady teny avy amin'ny bara fikarohana. RedNotebook dia lozisialy maimaim-poana eo ambanin'ny lisansa GPL.
Ho an'ireo mpampiasa Ubuntu sy derivative dia afaka mandeha any amin'ny Software Center ianao. Ireo izay tia mampiasa ny kinova farany azo antoka avy any amin'ny terminal:
Ho an'ireo mpampiasa Fedora:
Ho an'ireo mpampiasa Debian
RedNotbook dia azo alaina ao amin'ny trano fitehirizana distros hafa. Toy izany koa, ny kaody dia misy amin'ny tranokala ofisialy.
Miandry anao aho hanao tutorial kely momba ny fampiasana RedNotebook, manararaotra ny fotoam-pialan-tsasatry ny sekoly. Mandra-pahatongan'ny fizarana manaraka.
Loharano: pejy ofisialy RedNotebook
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » RedNotebook: ny bilaoginao sy ny diarinao ao amin'ny Linux (Fizarana I)
Toy ny naoty ho an'ny tonian-dahatsoratra, amin'ny Sabayon dia miverina koa izy ao amin'ny repos, mety ho ampy amin'ny:
na miaraka amin'i:
Tsy laviko fa tokony handeha tsara izy io, te hampiasa azy aho fa tsy nokapohiko tamin'ny lohan'olon-tokana ny fantsika ary nitady tutorial izay hanampy ahy aho ary tsy misy, tsara raha nanao azy io tao anatin'ny fotoana fohy aho satria tena hanampy tokoa, rehetra rehefa tonga any aminao i muse. Manontany anao aho rehefa manao izany, mba hanazavana mazava araka izay tratra.
Fotoana vitsy lasa izay, rehefa nitady rindranasa ahafahako mitazona bilaogy manokana aho, dia nahita ny RedNotebook, indrisy fa tsy resy lahatra tamin'ny fisehoany aho ary satria tsy nanana izay tena tadiaviko.
Niafara tamin'ny fampiasana FlatPress narovan'ny script bash izay nametrahako fandaharana ny tenako sy ny voila, toy ny perla everything ny zava-drehetra
Manana izany rehetra izany ny Contact ..
Contact tena mahavariana, tsy nahafaly ahy ny nihaona taminy.
Ny Contact dia tsy boky ifandraisana?
Vao nametraka azy aho fa rehefa manindry ny Vaovao dia tsy misy zavatra mitranga, hahaha. Miankina amin'ny fonosana hafa ve izany? Ilay napetrako dia ny kdepim-kontact ny Arch repos.
RedNotebook dia tsy natao handraisana naoty, fa diary manokana. Fantatro izany satria volana vitsivitsy lasa izay dia nanandrana azy koa aho nitady fomba hafa tsy andoavam-bola ho an'ny Evernote. Ny tsy fitovizany amin'i Evernote dia ny hoe, na dia mitanisa ireo naoty aza araka ny filaharan'ny famoronana ary mampiseho azy rehetra amin'ny interface voalohany miaraka amina fitrandrahana kely, RedNotebook dia manasokajy azy ireo amin'ny daty ary mampiseho ny andro misy azy amin'ny interface indrindra. Raha te hahita ny hafa ianao dia mila mizaha ny kalandrie.
Ho fanampin'izany, Evernote dia mamela anao hamorona naoty misaraka ho an'ny zavatra rehetra tadiavinao, fa ny RedNotebook dia mamorona naoty iray isan'andro fotsiny, ary ny zavatra rehetra tianao hosoratana dia ao anatin'io naoty io ihany (na dia azonao atao aza ny manampy mpampisaraka).
Ka nanjary tsy nisy dikany ny fikarohako safidy hafa maimaimpoana ho an'ny Evernote. Hotsapaiko izay lazain'i KZKG ^ Gaara, tsy tonga tao an-tsaiko ny fampiasana FlatPress ho azy. o_O
Hafahafa tokoa, nikorontana ny mpandraharaha mpampiasa. Andao hojerena…
Mihevitra aho fa efa vonona.
Eny vonona. 😀
Jereo eto ny hevitra nampihariko: https://blog.desdelinux.net/script-avanzado-en-bash-bashmd5-para-proteger-algo-explicacion-detallada/
Efa manana ny rakitrao manokana ao anaty lahatahiry voahodina miaraka amin'ny eCryptfs aho. Satria mampiasa rakitra an-tsoratra tsotra ny FlatPress fa tsy tahiry, ho mora amiko ny mitahiry azy ireo any ary mampandeha azy amin'ny fampiasana rohy an'ohatra.
Aleoko tsy mitahiry ny teny miafina, ary raha manao izany aho dia tsy hanao izany amin'ny MD5; mora loatra ny mamariparitra azy ireo. Misy tranokala aza apetakao fotsiny ny hash ary asehony anao ny lahatsoratra voadinika, toy izao: http://www.md5decrypt.org/
Tsy dia fantatro loatra ny momba an'i Evernote, saingy tsy manana fanohanan'ny linux ofisialy izy ary miaraka amin'izay nitranga tamin'ny Reader an'i Google, tsy dia matoky ny zavatra rahona aho.
Ampiasaiko amin'ny alàlan'ny PlayOnLinux izany. Tsy mihazakazaka 100% izy fa azo ekena ny fampisehoana (tsy toa ny NixNote izay manandrana mandrendrika ny solosaina).
Ny tombony azon'ny Evernote dia satria mahery vaika izy io. Azonao atao ny mitahiry pejy web, pikantsary, mampakatra rakitra, mandray naoty am-peo, mandahatra isaky ny kahie sy tag sns, sns.
Ny fiasan'ny rahona amin'ny rahona dia misy ny lesoka nefa mety tsara ihany koa raha tsy voafetra amin'ny PC-nao fa afaka manana ny naotinao ary maka vaovao amin'ny fitaovana rehetra; ary indrindra avy amin'ny finday. Azonao atao koa ny maka sary amin'ny fakantsary finday ary mampifandray azy ireo eo noho eo amin'ny naoty iray; Ary satria mamadika ny lahatsoratr'ireo sary ho lahatsoratra tadiavina izy io, raha maka sary ny antontan-taratasy ianao dia hamela anao hikaroka ao anatiny.
Ny antony itadiavanao safidy hafa maimaimpoana dia ny mitazona naoty manokana bebe kokoa ao, fa tsy hoe satria manolo ny fanoloana an'i Evernote ianao, izay tsy azo resena ankehitriny. Angamba amin'ny ho avy raha toa ka manjavona na mametraka fetran'ny mahasosotra (izay loza mitatao foana io) dia heveriko ny manolo azy tanteraka, fa amin'izao dia tena afa-po amin'izany aho.
Efa nanomboka tamin'ny fampianarana aho, aza hadino ny mitsidika ny bilaogy. Manome toky anao aho fa mialoha ny zoma izao. Salama.
Mampiasa Keepnote aho (http://keepnote.org/). Azonao atao ny mandray ireo naoty izay tianao, mandamina azy ireo amin'ny lahatahiry, manampy sary, mamorona rohy (na eo anelanelan'ny naoty aza). Ity ary mitazona azy ao amin'ny Dropbox mihoatra ny manarona ny zavatra ilaiko.
Raha ny momba ny Rednotebook dia nanandrana azy vetivety aho fa tsy naharesy lahatra ahy, tsy nahazo aina aho, na dia ny fampiasana azy ho diary manokana aza dia henjana loatra (tiako ny mandamina ny tenako bebe kokoa amin'ny lohahevitra fa tsy amin'ny daty) ary na ny tag cloud aza tsy mandeha mahazo aina.
Efa nanandrana KeepNote aho ary noho ny antony tsy nitahirizako azy dia manontany tena aho hoe inona izany. Averiko eto ilay izy mba hahitako hoe inona izany. 😛
Napetraka, andrana ...
Efa tadidiko fa noho ny autosave no nahatonga an'io. Manana safidy hitahiry ho azy ny lahatsoratra isaky ny X segondra; ny olana dia mangatsiaka vetivety isaky ny mitahiry vola ianao, ka raha misafidy autosave matetika be ianao (raha ny tena izy dia isaky ny 10 segondra) dia hangatsiaka hatrany hatrany. Raha ampitomboinao ny fotoana eo anelanelan'ny autosaves, dia mitombo koa ny risika very ny fiovana raha toa ka tsy mahomby ianao ary raha tsy hofehezinao dia ho laninao hitahiry tanana ny zava-drehetra. Amin'ny tranga rehetra, na amin'ny fomba ahoana, dia hihidy izy isaky ny manangona. Ny hatsiaka tsirairay dia maharitra iray segondra, fa rehefa afaka kelikely dia lasa manelingelina ihany.
Angamba izaho irery no lasa mangatsiaka. Na mety hoe rafitra ny rafitra ary mila manova zavatra ianao mba tsy hitrangany. : S
Manana ny autosave namboarina isaky ny 5 minitra aho. Ary raha ny amiko dia tsy dia tsikaritra loatra ny "hatsiaka", raha ny marina dia tsy hitako mihitsy.
Ataovy ao an-tsaina fa mampiasa data database SQLite ny keepnote, mety tsy voatsara izany ary izany no mahatonga ny sasany hahasosotra.
Izaho koa dia nitady mpitantana fanamarihana tsara ary sarotra ny mahita iray izay mifanaraka amin'ny zavatra tadiavinao.
Izay rehetra ao amin'ny rahona dia tsy mahaliana ahy.
Mampiasa Rednotebook aho handraisana naoty na hevitra, izay ampitako amin'ny tranonkala hafa, na dia voalamina amin'ny daty aza izy io, dia manana ny tag hatrany ianao hahitanao izay tadiavinao. Tsy azo arovana tenimiafina.
Mitovy amin'ny evernote, misy Nixnote, izay tsara, ary karakarain'ny lohahevitra,
Ny iray tsara dia ny MyNotex, izay karakarain'ny lohahevitra.
Mpitantana asa; Mahazo zavatra Gnome!, Ampiasako izany mba hatao zavatra sy naoty kely. Faly aho amin'izany.
Misy ihany koa ny lifeograph, izay journal miaro teny miafina ary mitovy amin'ny Rednotebook. Diary manokana kokoa izany.
Voadonao eo amin'ny lohanao ny fantsika, ny tsiambaratelon'ny fandaminana dia eo amin'ny marika.
Voampanga amin'ny fampiasana UEFI i Microsoft